१७ वर्षदेखि भेडा गोठमै अन्तरेको दसैं - फिचर - कान्तिपुर समाचार
१७ वर्षदेखि भेडा गोठमै अन्तरेको दसैं
आश्विन ३०, २०७८ आनन्द गौतम
ताप्लेजुङ — आर्थिक उपार्जन गर्न परदेशिएका र नोकरी गरिरहेका कतिपयले दसैं मान्न पाइरहेका हुँदैनन् । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका-११ फावाखोलाका गोपाल विष्टल(अन्तरे) आफ्नो गृह जिल्लामा भएरपनि विगत १७ वर्षदेखि दसैं मनाउन पाएका छैनन् । घरमा आमाबुवा भएपनि उनले आफ्ना अभिभावकको हातबाट टीका लगाउन नपाएको १७ वर्ष भयो ।
दसैं नमनाउने भएर वा मन नलागेर उनले मनाउन पाएका होइनन् । भोडाको गोठ लिएर लेक बेंसी गर्दै आएका अन्तरले गोठ छोड्न नपाउने भएकाले दसैं बिरानो बनेको हो । घरमा भएका वृद्ध बुबा, आमा, श्रीमती, छोरा, दाजु भाउजु र भाई बुहारीले रमाइलो गरी दसैं मानून भनेर फावाखोलाका अन्तरेले थुम्वा लगेका हुन् ।
भेडाको बथान घुमाउँदै फक्ताङलुङ गाउँपालिका-६ लेलेपको अम्जिलेसा पुगेका उनले विगत १७ वर्षदेखि वुवाआमाको हातको टिका जमरा थाप्न नपाएका हुन् । आफ्नै दुई वर्षीय सन्तानलाई पनि उनले दसैंको टिका लगाइदिएका छैनन् ।
कञ्चनजंघाको आधार शिविरवाट झारेको गोठ अहिले लेलेपको अम्जिलेसा पुर्याएका छन् । दसैं नजिकिद गर्दा उनीसँग गोठ झार्ने दुईवटा विकल्प हुन्छन् । एउटा, पाथीभराको हर्कटे क्षेत्र र दोस्रो, ग्याब्ला अम्जिलेसा क्षेत्र । हर्कटे क्षेत्रतिर लगे दसैंको बेला आफ्नो घर/गाउँ धुँवाएको देख्न पाउँछन् । अम्जिलेसा लगे बिलकुल छेलिन्छन । उनले दोस्रो विकल्प रोजे । दसैंको दिन घर पुग्न नपाउँदा र माथी डाडाँबाट टुलुटुलु हेर्नुपर्दा नराम्रो लाग्ने भएकाले छेलिने ठाउँमा भेडाको बथान झारेको उनी बताउँछन् । दाजुभाई मध्येका अन्तरे भाई भएकाले यसैबाट परिचित उनले गोठकै कारण दसैं मान्ने अवसर नपाएका हुन् । ‘म अहिले ३२ वर्षको भए, १७ वर्षदेखि चाँही दसैंमा घर पुगेको छैन,’ उनले भने ,‘त्यसभन्दा अघि त बुवाआमा सँगै भएर दसैं मनाइन्थ्यो ।’
‘तीन वर्ष त घर देखिने हर्कटे क्षेत्रमै गोठ लगें । तर, त्यो बेला दसैंको दिन गोठ छोडेर टिका लगाउन जान मन लाग्थ्यो । गोठ भने छाडिन । अर्को/अर्को वर्ष बानी पनि भयो,’ अन्तरेले भने । मोबाइल आएपछि फोन लाग्ने ठाउँमा गोठ झार्न थालेको उनले सुनाए ।
उनका बुवा कालीबहादुरले अन्तरे तेरो पालो आयो हैं भनेर फोनवाटै टिका लगाइदिएको पनि उनी भन्छन् । ‘चाडपर्वमा नरमाइलो त लाग्छ नी,’ अन्तरेले थपे, ‘यो त यस्तो काम रहेछ बाबुआमा मर्दापनि भेडा रुँगेर रुँदै बस्नुको विकल्प छैन ।’
बाँधेर राख्ने उपाय नभएको भेडा खुला ठाउँमा राखेर चरीचरन गराउँदै हिँडाउनु पर्ने भएकाले निरन्तर सँगै हुनुपर्छ । यो वर्ष अन्तरेसँग सुब्बा बाबै भनेर चिनिने चन्द्र केदेम छन् । सुब्बाचाँही दसैंमान्न अष्टमिको दिन घर फर्कन्छन् । घर छेउमै खर्क नभएकाले अन्तरेले दसैंकालागि कम्तिमा दुई/तीन दिनको बिदा पाउनु पर्छ ।
दसैंमा भेडा पालकले छुट्टि नपाउनुको अर्कोपनि कारण छ । असोज र कार्तिकमा अधिकांस भेडा सुत्केरी हुन्छन् । गर्भवती भेडाले राम्रो चौर खोजेर सन्तान जन्माउँछन् । भीरको नजिकतिर बच्चा पाए लडेर मर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । त्यसैले बच्चाको संरक्षणका लागि पनि योबेला गोठमै बस्नुपर्छ । ‘राति र दिउँसो सरोवर जस्तो जन्माउँछ,’ अन्तरे भन्छन्, ‘चरनमा गएको कतिपय फर्किन सक्दैन त्यसैले पनि पछिपछि हिँड्नुपर्छ ।’ आफ्नो गोठमा यतिबेला कम्तिमा नब्बे देखि एक सय बढी माउले बच्चा जन्माउने उनले बताए ।
भेडाका बथान अहिले ताप्लेजुङमा कम हुँदै गएको छ । फावाखोलाका पूर्व वडाध्यक्ष धनबहादुर विष्टका अनुसार १५ वर्ष अघिसम्म १२ वटा बथान फावा खोलाको एउटै गाउँमा थिए । स्थानीय एउटा बथानलाई एक चोक भन्छन् । नजिकमा भएरपनि गोठालाले चाडपर्व मनाउन नपाएको धनबहादुरको पनि अनुभव छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७८ १४:४४
विद्यार्थीहहरू स्थानीयले भोगेका यथार्थ र उनीहरूका सपनासँग परिचित हुनु पर्छ । समुदायसँग मिलेर स्थानीय समस्याहरूको समाधान निकाल्नु पर्छ । यसबाट विद्यार्थीहरूमा समस्या पहिचान गर्ने र स्रोतसाधन जुटाएर समाधान निकाल्ने सीपको विकास हुन्छ ।
आश्विन २८, २०७८ नरोत्तम अर्याल
करिब एक दशकदेखि कलेज ओहोरदोहोर गर्ने बाटो त्यही थियो । कक्षाकोठाको झ्यालबाट हेर्दा देखिने ठाउँमा उक्त वनस्पति थियो । तर, धतुरोजस्तो देखिने त्यो वनस्पति जहिल्यै नजरबाट ओझेलमा पर्ने गरेको थियो ।
‘यो बोटबारे शिक्षक, विद्यार्थीहरूलाई के थाहा छ ?’, उनले फेरि सोधे ।
हामी अवाक भयौँ । हामीले हेर्न छुटाएछौँ—त्यो वनस्पति भित्र कस्तो रसायन हुन्छ ? मानिसलाई अक्सिजन दिनेबाहेक अन्य उपयोगिता के के हुनसक्छ ? जडिबुटी हो कि ? चौपायाले खान मिल्ने घाँस ? निर्माणकार्य पो प्रयोग गर्न मिल्छ कि ?
एक कार्यशालाको दौरान तिनै प्राध्यापकसँग ललितपुर कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको एक गाउँमा गएका थियौँ । गाउँमा विद्यालय छेउमै एउटा दूध सङ्कलन केन्द्र थियो । गाईभौसी पाल्ने हरेक घरबाट त्यहाँ दूध जम्मा गरिन्थ्यो ।
हामीले विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग सोध्यौँ, ‘यहाँ विज्ञानको कुन सिद्धान्त र प्रविधि प्रयोग हुन्छ ? किसानलाई दिने र उपभोक्तालाई बेच्ने दूधको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ ? दूधबाट आम्दानी बढाउन अरू के के गर्न सकिन्छ होला ?’
यस्ता धेरै प्रश्नहरूमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू अनभिज्ञ थिए ।
यस्ता अनेकन घटनाहरूपछि अनुभूत हुन थाल्यो—कक्षाकोठाको पर्खालभित्र पाठ्यक्रमले तोकेको विषयवस्तु त पढाइ भइरहेकै थियो । तर, यो प्रक्रियामा पाठ्यक्रम र समुदाय जोडिएको थिएन । कलेज परिसरबाट ५० मिटर टाढा आफै उम्रिएर बढिरहेको एउटा बिरूवा पाठ्यक्रममा अटाएको थिएन । विद्यार्थीहरूका अभिभावकको आम्दानीको मूल स्रोत दूध उत्पादनलाई बिक्री गर्ने सङ्कलन केन्द्र पनि विद्यालयको पाठ्यक्रममा अटाएको थिएन ।
यसको अर्थ यो हो कि, शैक्षिक संस्थाहरू र समुदायका अन्य पक्षबीच सहकार्य भइरहेको छैन । आज उच्च शिक्षामा अनेकन सवालहरू छन् । शिक्षा इतिहासको पाठबाट सिक्दै भविष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने विषय हो । समग्र समाजलाई नै गति र दिशा दिनुपर्ने थियो । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
शैक्षिक संस्था आफैले मात्र गुणस्तरीय र उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्छु भनेर सक्दैन । एउटा विद्यार्थीको अर्थपूर्ण सिकाइ र प्रगतिमा समाजका सम्पूर्ण पक्षहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।
भनाइ नै छ, एउटा बच्चालाई शिक्षित बनाउन पुरै गाउँ नै लाग्नु पर्छ । एउटा शैक्षिक संस्था जति नै उत्कृष्ट र सक्षम भए पनि शैक्षिक संस्थाभित्र सिङ्गो समाज खडा गर्न सक्दैन । जस्तै— म्युजियम, आर्ट ग्यालरी, खेतरबारी, जङ्गल, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर आदि ।
आखिर सभ्य, इमानदार र सक्षम नागरिक कसलाई मन पर्दैन र ? समाजका हरेक संस्थाहरू र व्यक्तिहरूले भविष्यमा आम नागरिकसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पुरातन कालदेखि नै शैक्षिक अभ्यास भएको बौद्ध, हिन्दू आदि दर्शनहरूले अनुभवजन्य ज्ञानलाई निकै महत्व दिन्छन् । गुरुकुलीन अभ्यासमा शिष्यहरूलाई प्रकृति तथा मानव समाजमा विभिन्न अनुभव र अनुभूतिको अभ्यास गर्न पठाएको पाइन्छ । गौतम बुद्धले कुनै कुरा आफूले अनुभव र अनुभूति नगरी विश्वास नगर्नु भनेर सिकाएको पाइन्छ । पाउलो फ्रेरे, जोन डिवे, डेभिड कोल्भजस्ता धेरैलाई प्रभाव पारेका शिक्षाकर्मीहरू पनि विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने अनुभवलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । उनीहरू ज्ञानको लागि विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागितामा जोड दिन्छन् ।
आज नेपालमा धेरैले स्वीकार गरेको तथ्य हो— शिक्षालाई व्यवहारमुखी, सीपमूलक र भविष्य उन्मुख बनाउनै पर्छ । यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनकै क्रममा विभिन्न अनुभवहरू दिनु पर्छ । प्राविधिक, शैक्षिक संस्थामा सीपलाई अभ्यास गर्ने अनुभव त हुन्छ । तर, समग्र समुदायकै अनुभव नहुन सक्छ । यसको लागि समुदायका विभिन्न पक्षहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्छ ।
समुदायमा विभिन्न संघसंस्था र पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरू हुन्छन् । यीमध्ये कति मानिस र संघसंस्थाहरूको स्थानीय शैक्षिक संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । कति व्यक्तिहरूका सन्तान पढिरहेका हुन सक्छन् । कति संघसंस्थाहरूले शैक्षिक प्रयोजनको लागि परियोजना सन्चालन गरिरहेका हुन सक्छन् ।
यी व्यक्ति र संस्थाबाहेक अन्य पनि शैक्षिक संस्थासँग जोडिनु पर्छ । उनीहरूसँग आफ्नो समुदायमा काम गरेको अनुभव हुन्छ । समुदायका स्रोत, साधन र चुनौतीहरूसँग उनीहरू परिचित हुन्छन् । समुदायको जनसाङ्खिकी, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति र प्रविधिसँग उनीहरू जानकार हुन्छन् । समुदायको वास्तविकता सिकाउन उनीहरूबाहेक अरू कोही विज्ञ हुनै सक्दैन ।
विद्यार्थीहहरू स्थानीयले भोगेका यथार्थ र उनीहरूका सपनासँग परिचित हुनु पर्छ । समुदायले भोगिरहेका चुनौतीको अपनत्व शैक्षिक संस्थाहरूले पनि लिनु पर्छ । र, समुदायसँग मिलेर स्थानीय समस्याहरूको समाधान निकाल्नु पर्छ । यसबाट विद्यार्थीहरूमा सुरुदेखि नै समस्या पहिचान गर्ने र स्रोतसाधन जुटाएर समाधान निकाल्ने सीपको विकास हुन्छ ।
यसको लागि सुर्खेतमा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले गज्जबको अभ्यास गरिरहेको छ । उक्त विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सीप सिकाउनका लागि समुदायका स्रोत व्यक्तिहरू ल्याउँछन् । खेतीपाती र पशुपालनसम्बन्धी स्थानीय तवरमै समुदायका सदस्यहरूले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् ।
काभ्रेपलान्चोक मन्डनदेउपुरको महाकाली माध्यमिक विद्यालयमा गाउँका विभिन्न व्यक्तिहरूको विज्ञता र उपलब्ध समय पहिचान गरेर सोहीअनुसार कक्षा राखिन्छ । यसमा गाउँको आमा समूहसँगको समन्वयमा विभिन्न स्थानीय सीपहरू विद्यार्थीहरूलाई सिकाइन्छ । कसैले टपरी गाँस्न सिकाउँछन् । कसैले चकटी र चट्टाई बनाउन सिकाउँछन् । कसैले असारे गीत र अन्य लोक भाका सिकाउँछन् । काभ्रेपलान्चोक लामिडाँडाको गोल्मादेवी प्राथमिक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि समुदायका सदस्यहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सीप सिकाउने गर्छन् । जस्तैः माघमा चाकु बनाउने, आलु रोप्ने, लसुन मुठा पार्ने आदि ।
यस्ता अनेकन अभ्यासहरू भइरहेका छन् । यसलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समुदाय पनि अरूमा आश्रित हुने वा अनुदानको अपेक्षा गर्ने सोचबाट मुक्त भएर शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
समुदायका हरेक सदस्य र शैक्षिक संस्थाहरू मिलेर नवीनतम सोच र ज्ञानको सहसिर्जना गर्न सकिन्छ । यसबाट मात्र उद्यमशील सोचको निर्माण हुन्छ ।
उद्योग, व्यवसायसँग सहकार्य
आजसम्म शिक्षण संस्थाको काम विद्यार्थीहरूलाई डिग्री दिने र उद्योग, व्यवसायको काम रोजगार दिनेजस्तो मात्र देखिएको छ । यी दुई पक्ष अन्तरनिर्भर छन् । तर संवाद र सहकार्य न्यूनतम देखिन्छ ।
उद्योगी, व्यवसायीबाट टिप्पणीहरू आउँछ— शिक्षा खत्तम भयो । यसले सीप सिकाएन । अब्बल शैक्षिक डिग्री पाएको जनशक्तिले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन ।
शैक्षिक संस्थाहरूबाट गुनासो सुनिन्छ— विद्यार्थीहरूको सीप र क्षमता विकासमा उद्योग, व्यवसायले सहयोग नै गरेनन् । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको ‘इन्टर्नसीप’ गराउन पनि मुस्किल छ । अनुसन्धानमा त झन् लगानी नै छैन ।
विद्यार्थीहरूले अध्ययनकै क्रममा पेशागत अभ्यास, अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी ‘रिफ्लेक्सन’ गर्न पाएनन् भने उनीहरूले पाएको सैद्धान्तिक ज्ञान मजबुत र व्यवहारमुखी हुन सक्दैन । यसले उद्योग, व्यवसायको समग्र सामर्थ्यमै प्रभाव पार्छ ।
फिनल्यान्डको एउटा अभ्यास छ । ‘डेमोला’ भनिने परियोजनामार्फत् शैक्षिक संस्था र विभिन्न संस्थाहरू सँगै आएर ती संस्थाहरूले भोगिरहेका चुनौतीहरूको समाधान निकाल्न खोज्छन् । यसमा संस्थाहरूको व्यावहारिक र शैक्षिक संस्थाहरूको सैद्दान्तिक पक्षहरूको गज्जबको मिलन हुन्छ । यस प्रक्रियामा विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू र सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीहरू मिलेर संयुक्त रूपमा समस्याको विश्लेषण गर्दै समाधान निकाल्छन् ।
विभिन्न देशमा विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्ने र उद्योग, व्यवसायले त्यसलाई कार्यान्वयन र विकास गरेको उदाहरणहरू पाइन्छ ।
पुरानै एकाङ्की धरातलमा जाने हो भने शैक्षिक संस्था र उद्योग, व्यवसायमा कुनै कायापलट हुने सङ्केत देखिँदैन । एकअर्कालाई उन्नत दिशामा लैजान उद्योग, व्यवसाय र शैक्षिक संस्थाबीच यथासक्य चाँडो सहकार्य सुरू हुनु जरूरी छ ।
सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू राज्यकै स्रोतबाट सन्चालित छन् । अपशोच ! यी दुईबीच पनि सहकार्य विरलै भएको पाइन्छ । झन् निजी शैक्षिक संस्थाको त कुरै छाडौँ । कतै स्रोत र साधन आवश्यक पर्‍यो वा कुनै कुराको अनुमति चाहियो भने शैक्षिक संस्थाहरू सरकारसमक्ष पुग्छन् । कार्यक्रमहरूमा सरकारी कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई अतिथिको रूपमा बोलाउँछन् । सरकार पनि शैक्षिक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने र आफू अन्तर्गतकालाई स्रोत र साधन दिने काममा मात्र सीमित छ ।
सरकारलाई नीतिनिर्माण गर्न अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । नयाँ योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नवीनतम सोच, ज्ञान, प्रविधि आदि आवश्यक पर्छ । यसको लागि शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य हुनसक्छ । शैक्षिक संस्थामा आवद्ध विज्ञ, अनुसन्धाता र विद्यार्थीहरू यस कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् । सरकारी योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा विद्यार्थीहरूको सहभागिताले उनीहरू सरकारलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाउँछन् । यसबाट विद्यार्थीहरूमा लोकतान्त्रिक नागरिक चेतको विकास हुनेछ ।
किङ्ग्स कलेजले समुदायका पक्षहरूलाई पाठ्यक्रममा जोड्ने हिसाबले पाँचखाल नगरपालिकासँग केही महिनादेखि सहकार्य गरिरहेको छ । हामीले नगरपालिका क्षेत्रको ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा ल्याउने केही कोसिस गरेका छौँ । स्थानीय उद्यमीहरूलाई बीबीए र एमबीएको कक्षामा अतिथि शिक्षकको रूपमा बोलाउने गरेका छौँ । नगरपालिकाका शिक्षक र हाम्रा शिक्षकबीच सिकाइ आदानप्रदान गरिरहेका छौँ । नगरपालिकाका उद्यमीहरूको कथालाई पाठ्यक्रममै समावेश गरेका छौँ । नगरपालिकाको आवश्यक सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा शाखासँग सहकार्य गर्दै स्थानीय विद्यालयका लागि विभिन्न सिकाइ कार्यशाला सन्चालन गरेका छौँ । आगामी दिनमा स्थानीय सरकार, उद्यमी र कलेज मिलेर स्थानीय स्रोत र साधन पहिचान गर्दै स्थानीय रूपमा देखिएका आर्थिक, शैक्षिक, वातावरणीय र सामाजिक समस्याहरूको समाधान खोज्ने प्रयासमा छौँ ।
शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य
हाम्रोमा शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गर्ने चलन एकदम कम छ । अझ सँगसँगै अनुसन्धान वा कुनै साझा विषयमा ज्ञान उत्पादन गर्ने काम त लगभग शून्य बराबर छ ।
सार्वजनिक र निजीको बहसमा यो स्पष्ट देखिन्छ कि सार्वजनिकहरू आफ्नो दैनिकीमा सन्तुष्ट देखिन्छ । निजीहरू व्यापारिक चङ्गुलमा परेका छन् । यसमा पनि साना शैक्षिक संस्थाहरू बाँच्नकै लागि संघर्षमा छन् । ठूला र ‘ख्याति’ कमाएका शैक्षिक संस्थाहरू पनि आफ्नै दुनियाँमा मस्त छन् ।
कुनै नयाँ प्रयोग वा पहलको लागि तत्परता एकदम कम देखिन्छ । सबैलाई पाठ्यक्रम सकाउने र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने चटारो छ । परीक्षामाथि उठेर जीवनको लागि विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्ने सोच राख्ने हो भने शैक्षिक संस्थाहरूबीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ ।
यस अगाडि उल्लिखित काभ्रेको महाकाली माध्यमिक विद्यालयमा मौलिक नेपाली तरिकाले सहकार्य गरिरहेको उदाहरण देख्न सकिन्छ । यस विद्यालयले वर्षेनी केही विद्यालयसँग ‘मीत’ लाउने गरेको रहेछ । ‘मीत’ लाएको विद्यालयबीच शिक्षकहरू साटासाट गरेर कक्षा लिने, विद्यार्थीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम गर्ने, सिकाइ कार्यशाला आयोजना गर्ने आदि गरेको रहेछ ।
यस विद्यालयले जस्तै अभ्यासहरू गर्न सकियो भने कम स्रोतमा अधिकतम कामहरू गर्न सकिन्छ । एउटा विश्वविद्यालय वा कलेजबाट उत्पादित ज्ञान अर्कोमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एउटा संस्थाको विज्ञता अर्कोले उपयोग गर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धाको सोचबाट माथि उठेर सहकार्य सुरू गर्ने हो भने यसले समाजलाई नयाँ दिशा दिनेछ ।
विभिन्न सङ्कायहरू एकअर्काबाट छुट्टिएका छन् । एउटा विद्यार्थीको जीवन वा समाजको आवश्यकतालाई ध्यान दिने हो भने विभिन्न सङ्कायहरू एकै ठाउँ जोडिनु आवश्यक छ । कुनै एउटा उद्यमशीलताको उदाहरण लिऔँ । एउटा उद्यम गर्न उद्यमशील सोच, व्यवस्थापन, विज्ञान, प्रविधि, कला आदि सम्पूर्ण पक्षहरू चाहिन्छ । तर, हामी सबैलाई छुट्याएर सिकाइरहेका छौँ ।
हुन त अचेल विभिन्न सङ्कायहरू जोडिएर बनेका बहुसङ्काय, अन्तरसङ्काय तथा ‘लिबरल आर्ट्स’जस्ता केही कार्यक्रमहरू सन्चालित हुन्छन् । विद्यालयमा पनि प्राथमिक कक्षाहरूमा ‘इन्टिग्रेटेड’ पाठ्यक्रमबाट सिकाइ हुन्छ । यसको आफ्नै महत्व छ ।
यो सँगसँगै मूलभूत रूपमा एउटै सङ्कायका रूपमा सन्चालित कार्यक्रमबीच पनि विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकास र समुदायकै हितको लागि सहकार्य हुनु पर्छ ।
हामी दशकौँदेखि नेपाललाई माटो सुहाउँदो शिक्षा आवश्यक छ भन्दै रटान लगाउँदै आइरहेका छौँ । यो सोचलाई मूर्तरूप दिन नीतिगत तहमा निर्णय भएर मात्र पुग्दैन । यसको लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा आएर संवाद सुरू गर्नु पर्छ ।
एकअर्काको महत्वलाईलाई बुझ्दै आलोचनात्मक छलफलका लागि खुला हुनु पर्छ । आफ्ना सामर्थ्य र कमजोरीहरू पहिचान गर्दै एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी होइन परिपूरकको रूपमा बुझ्नु पर्छ ।
‘म भर्सेस तँ’ को सोच छाड्नै पर्छ । उसले गर्दा यस्तो भयो भनेर भन्नु भन्दा हामी सँगै मिलेर शिक्षालाई समुदाय र जीवनसँग जोड्न सकिन्छ । सहकार्य, एकता र आपसी विश्वासले नै उन्नत समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ । भविष्यको पिढीँलाई एउटा सभ्य र उन्नत समाज निर्माणमा सहयोग गरौँ ।
पाठ्यक्रम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकार वा शैक्षिक संस्थाहरूको मात्र होइन । यसका लागि समुदायका सबै पक्षले जिम्मेवारी लिनु पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले समन्वयकारी भूमिका खेली यस प्रक्रियाको सुरूवात गर्नु पर्छ ।
अर्याल किङ्गस कलेज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७८ १४:४२
सन्तान च्यापेर इँटाभट्टामा
फिरन्ते संगीतकारको नेपाल मोह
लन्डनमा १६ वर्षदेखि बस कुदाउँदै नेपाली मूलका मेयर
खर्च टार्न बेचिएकी ९ वर्षीया अफगान बालिकाको उद्धार
रारा निकुञ्‍ज मध्यवर्तीबासीका पीडा- ‘खानकै दु:ख हुने भो’
साइबर संसार, भर्चुअल द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
कटक मल्ल मंसिर २३, २०७८
साइबर स्पेसमा भइरहेको जासुसीको वर्तमान अवस्थालाई लिएर कतिपय भन्छन्— यो जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एटिफोर’ मा वर्णन गरिएको ‘बिग ब्रदर निगरानी’ जस्तो छ । अर्थात्, ‘ठूलदाइले...
राजावाद, बहुलवाद र पुस्तान्तरण
इन्द्र अधिकारी मंसिर २३, २०७८
कामका हिसाबले मंसिर किसानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण महिना मानिन्छ । खेतीपाती भित्र्याउने र नयाँ बालीनालीका लागि जमिन तयार गर्ने महिना भएकाले होला, काममा अति व्यस्त भएको अवस्थालाई...
मेडिकल कलेजको मनोमानी
सम्पादकीय मंसिर २३, २०७८
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग मन परी शुल्क असुले भनेरै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले...
कांग्रेस गुडाउने पांग्रा
चन्द्रकिशोर मंसिर २२, २०७८
चौधौं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसप्रति अपेक्षाका साथै आशंका पनि बढेका छन् । दलको शीर्ष पदका लागि दाबी गर्ने नामहरूको वाहवाहीभित्र छिरेर यसका वस्तुगत समस्या केलाउँदा...
देश चलाउनेहरूको उमेर
मैना धिताल मंसिर २२, २०७८
मुख्य दलहरूका महाधिवेशनसँगै राजनीतिमा ‘उमेर’ फेरि बहसमा आएको छ । पटकपटक उही व्यक्ति एउटै पदमा दोहोरिन नहुने र निश्चित उमेरपछि राजनीतिबाट संन्यास लिएर युवाहरूका लागि...
राजनीति र शासन प्रणालीको रूपान्तरण
अंगराज तिमिल्सिना मंसिर २२, २०७८
अहिले नेपालमा ठूला पार्टीहरूका महाधिवेशन धमाधम भइरहेका छन् जसले आम चुनावको माहोल तयार गरिरहेको छ । अर्कातिर, न्यायालयभित्र देखिएको संकट, संसद्मा देखिएको गतिरोध, संवैधानिक संस्थाहरू आफैंले...
इटाइपु बाँध : ब्राजिल-पाराग्वे विश्वासको नमुना
कुलरत्न भुर्तेल मंसिर २२, २०७८
अन्तर्राष्ट्र्रिय जलस्रोत कानुनले साझा नदीको विकास गर्दा आपसी सद्भाव र विश्वास महत्त्वपूर्ण हुने कुरा स्विकारेको छ । असल छिमेक भावनाले प्रेरित हुँदै बढेको आपसी सद्भावका कारण...
संसदीय समितिको अनुचित निर्देशन
सम्पादकीय मंसिर २२, २०७८
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आफ्नै पूर्वनिर्देशनविपरीत नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिन सरकारलाई निर्देशनसहितको पत्र काट्नु आपत्तिजक छ । समितिले प्रक्रिया पूरा...
निर्मलालाई न्यायको खोजी
मधु शाही मंसिर २२, २०७८
यति बेला लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको व्यापक चर्चा भइरहेको छ । पाँचतारे होटलमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका गोष्ठी–सेमिनारहरू पनि चलिरहेकै होलान् । एकातिर यस्तो छ, अर्कातिर सम्पत्तिकै...
पूर्ण खोप प्राप्त ८८,६९,०६७
अपडेटः बुधबार, २२ मंसिर, २०७८ । १७ : ५७ बजे